AMISOM oo ka hadashay shil ay ka geystay Muqdisho – Balcad.com Teyteyleey
AMISOM oo ka hadashay shil ay ka geystay Muqdisho
By Abdi Malik	 On Sep 27, 2017
Ciidamada Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa ka qoomameeyay falkii mid ka mid ah Gaadiidkooda uu ku jiiray gaadiid uu lahaa muwaadin Soomaaliyeed, kaasi oo ka dhacay Isgoyska KM4 ee magaalada Muqdisho
War qoraal ah oo ka soo baxay AMISOM ayaa waxaa lagu sheegay in ay ka xun tahay falkan, nasiib darana uu ahaa gaari qof shacab ah uu lahaa in Ciidanka AMISOM ay jiirsiiyaan gawaaridooda dagaalka.
Waxay kaloo sheegtay AMISOM hadda in ay hawlan tahay baarista dhabta ah iyo sida ay wax u dhaceen, kadibna ay magdhow siin doonaan muwaadinkii lahaa gaariga.
Sidoo kale qoraalka AMISOM waxaa lagu sheegay in Ciidanka Midowga Afirka ay rajeynayaan in ay dib u xaqiijiyaan balanqaadka ay ku taageerayaan dadka Soomaaliyeed, dib u soo celinta nabadda iyo xasilloonida.
Dhanka kale Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed oo maanta la kulmay Ehelada dadkii AMISOM ay dhibaatada u geysteen ayaa sheegay inuusan marnaba raali ka noqon karin in la dhibaateeyo shacabka Muqdisho iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed.
”Marna raali kama ihi in Muqdishaawiga ama Muwaadin Soomaaliyeed dhib loo geysto. Waxaan la xiriiray AMISOM, jawaab deg deg ah ayaan ka sugeynaa in ay ka bixiyaan sidoo kalena askarigii falka geystay cadaaladda la horkeeno magdhawna ay ka bixiyaan.” Ayuu ugu dambeyntii sheegay Guddoomiye Thaabit.
The post AMISOM oo ka hadashay shil ay ka geystay Muqdisho appeared first on Ilwareed Online.